Imaatinka iMac Pro wuxuu noqon doonaa waxa lagu calaamadeeyo waddo cusub oo Apple | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan aad ugu dhownahay taariikhda ay tahay in Apple ay soo saarto qaabka cusub ee iMac, iMac pro. Sidii aan horeyba u ogayn dhowr bilood, waa iMac aad u awood badan oo loo qaabeeyey si xirfadlayaasha fiidiyowga iyo sawir qaadista ay u lahaan karaan wax-wada-qabsi ka dhigaya shaqadooda wax soo saar badan.
Maqaallo badan ayaa horay loo qoray oo ku saabsan sida uu u eg yahay iMac Pro-ka cusub, maxay yihiin astaamahiisa iyo waxyaabaha cusub ee ugu waaweyn marka la barbar dhigo iMac-ka hadda jira. Si kastaba ha noqotee, waxa aan rabo inaan ku milicsado qodobkaan waa wax kale.
Sida aan aragno, waxaan ku raaxeysaneynay fikradan cusub ee iMac dhowr sano hadda. Markii aan ka hadlayo fikrad cusub waxaan ula jeedaa iMac-af af leh oo soo muuqday markii Apple go'aansatay inay tahay dhammaadkii DVD-yada DVD ee jiilalkii hore lahaayeen iyo in shaashadaha la beddelay by dariishado cusub si buuxda u wada ururiyey galaaska.
Muddo sanado ah moodeelku wuu sii jiray iyo waxa Apple wax ka beddelay Waa gudaha, dekedaha ay dhabarka ku haysato iyo shaashadda ay fuulaan iyagoo sita isla tayada 4K iyo 5K Retina.
Waqti kadib, Qalab cusub ayaa yimid sida Magic TrackPad 2 cusub, Keyboard-ka Magic-ka oo leh batteri ama Magic Mouse 2 sidoo kale leh batari. Illaa iyo hadda, Apple waxay wax ka beddeshay wax kasta oo wax laga beddeli karo, iyada oo keliya looga tegayo in ay heli karaan farsamo-yaqaanno heerkoodu sarreeyo iyo tiro aad u badan oo RAM ah marka lagu daro midabada aluminium ee lagu farsameeyo iMac.
Taasina waa waxa saxda ah ee ku dhacay iMac Pro. Waxay noo soo bandhigeen iMac ku jira cirro cirro ah, taas oo waxa laga arkaa ay tahay midabka helay aqbalida ugu badan oo ay weheliso midabka lacagta ee nolosha oo dhan. Xaqiijin ahaan waxaan haynaa in MacBook Pro cusub ee c0n iyo iyada oo aan TouchBar lasiinaynin midab dahabi ah oo aan ubaxayn dahab sida Macbook 12 ah.
Isbedelka midabka ee iMac Pro-kan cusub, aagagga midabka madow mar kale ayuu yimaadaa. Maaha markii ugu horeysay ee ay dhacdo waana taas Horeba maalinteedii PowerMac G4 Cube, Mac oo in yar ku qaadatay suuqa ayaa la soo baxay qaybo ka mid ah meelaha madow.
Waxaas oo dhan waxaan rabaa in aan ka milicsado waxa Apple isku dayayo in ay na fahansiiyaan. Apple waxay suuqa u diyaarinaysaa kacaanka soo socda markay tahay iMac. Dhammaantood waxay ku bilaabmeen imaatinka shaashadaha 'Retina screens' iyaga oo ku jira qaab jaangooyooyin iyaga iyo jaantusyada kala duwan si haddaba loogu deeqo awood aad u weyn. Awood sannado badan gaari doonta dhammaan moodooyinka waana hubaa in tani ay tahay uun hordhaca imaatinka xaqiiqada dalwaddii, tiknoolajiyad awood u leh inay wax ka bedesho fiidiyowga waxay u baahan doontaa awood aad u badan.
Marka, yeynaan quusan maxaa yeelay awoodda iMac Pro hadda, maalmo yar gudahood waxay noqon doontaa in yar oo keliya, qiimahooda, laakiin sannado badan waxay ahaan doontaa annaga oo dhan. Yaan iibsan karin Mac Pro hadda 2000 euro? Maaha in qof kastaa haysto lacagtaas, laakiin waxaan ula jeedaa waxay tahay inay jiraan MacBook Faa'iido ah oo ka sarreeya qiimahaas, qiime horay u calaamadeeyay awood ay ku jiraan oo keliya Mac Pro Haddana isla lacagtaas waxaad ku haysataa laptop-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Imaatinka iMac Pro wuxuu noqon doonaa waxa calaamadinaya waddo cusub oo Apple ah
Hagaag, mac pro hore wuxuu ahaa qashin dhab ah qiimahiisa sidoo kalena duugoobay ilaa dhalashadiisii ​​... Waxaan rajeynayaa in tan quruxda ka sokow ay ujeedo ujeedo ...